तरुण दलकाे प्रदर्शनमा अश्रु ग्यास प्रहार
जनकराज सापकाेटा, तस्बिर : अंगद ढकाल, तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ
डा. केसीकाे समर्थनमा तरुण दलले अायाेजना गरेकाे प्रदर्शनमा प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेकाे छ । शनिबार बानेश्वरमा निशेधित क्षेत्र ताेड्न खाेजेकाे भन्दै प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेकाे हाे । प्रहरीले ८ राउण्ड ग्यास प्रहार गरेकाे छ । झडपमा तरुण दलका अध्यक्ष जीतज‌ंग बस्नेतसहित केही प्रदशर्नकारी र एक प्रहरी घाइते छन् ।
डा. केसीको समर्थनमा प्रदर्शन (फोटाेफिचर)
२२ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाकाे माग गर्दै शनिबार काठमाडाैंमा प्रदर्शन गरिएकाे छ। सोलिडारिटी फर प्रोफेसर गोविन्द केसी अलाइन्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, अधिकारवादी, चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरू सहभागी छन्। र्‌यालीमा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्की, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र, त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा केदारभक्त माथेमा, मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी, लेखक खगेन्द्र संग्रौला, अभिनेत्री मनिषा कोइरालालगायत छन्।
हात्तीको समूहले राजमार्ग अवरुद्ध [तस्बिरहरु]
एकै पटक ३५ वटा जंगली हात्ती राजमार्गमा आएपछि अमलेखगञ्ज नजिकको आधाभारमा सडक अवरुद्ध भएको छ । पर्सा निकुञ्जले संभावित दुर्घटना हुन नदिन यातायात रोकेको सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक रामले टेलिफोनमा जानकारी दिए ।
करिब पौने २ बजे, राजधानीको भृकुटीमण्डपमा थापाथलीतर्फ जान गाडी पर्खिरहेको थिएँ । यसैबखत एक्कासी पानी पर्‍यो । केहीबेर अघिसम्म सामान्य देखिएका मान्छेको दैनिकी एक्कासी बिथोलियो । पैदल हिँड्दै गरेकाहरु कोही रुखमुनि त कोही प्रतीक्षालयमुनि ओत लिन तँछाडमछाड गर्न थाले ।
सोलुखुम्बुमा लटरम्म किवी [फोटोफिचर]
यहाँ किवी फल भित्रिएको ५ वर्ष भयो । किसान र उपभोक्ताका लागि यो फल नयाँ हो । वागवानी केन्द्र सोलुखुम्बुका वरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृत चन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार किवी १ सय वर्ष बाँचेको तथ्यांक छ । नेपालमा भित्रिएको भने ३० वर्ष भयो । नेपालमा विदेशी संस्थाले भित्राएका हुन् ।
भारतले सिमा क्षेत्रमा बनाएको महलीसागर बाँधमा अस्थाई रुपमा काठ राखेर पानी छेकेपछि नेपालको धानबाली डुबानमा परेको छ ।